Estudio Semalt: SEO Ho An'ny Ezaka Fampivelarana ny Digital Integrada Marketing
Ny fangatahana an-tserasera dia mila fisoratana anarana amin'ny aterineto. Amin'ny ankapobeny, ny mpanjifa dia mitsidika ny tranonkala solo amin'ny fahadisoana na ny fahamendrehana. Ny iray ampiasaina amin'ny iray amin'ireo, ny logotype sy ny vokatra fampahafantarana izay afaka mifandray amin'ny mpanjifa mba hanondroana azy. Ny fampahalalam-baovao tahaka izany dia ny fototra ijoroan'ny fampahalalam-baovao izay manangana ny tranonkala fifaneraserana. Ny tranokalan'ny tranokalam-pifaneraserana dia ny fampahafantarana izay mahomby amin'ny fisafidianana sy ny mpanjifa maro hafa izay afaka mifanerasera amin'ny sehatr'asa - time tracking apps.
Ny Internet dia mihoatra ny 13 miliara dôlara eo ho eo. Ao amin'ny tranonkalan'ny Search Engine Optimization (SEO), izay mibaribary ny tranonkala fifaneraserana amin'ny Internet, dia toy izao ny fampiharana ara-tsosialy an-tserasera amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso an-tserasera.
Ny SEO, ny mpiasa dia afaka mametraka ireo mpanjifany amin'ny tranonkalany mba hahita ny sehatr'asa ho an'ny mpiara-miombon'antoka rehetra amin'ny mediam-bahoaka. Io dia afaka mandinika amin'ny fomba ofisialy ny fampiharana ny fanovana farany indrindra ao amin'ny Biraon'ny Valantserasera. Ny fampiroboroboana sy famoaham-bola isan-tsokajiny dia ny fampiroboroboana ny alam-barotra nomena.
Andrew Dyhan, mpitsara avy amin'ny mpividy Semalt ,
Fanampim-panazavana momba ny sehatra ara-tsosialy sy ara-barotra ara-barotra, izay manan-kery eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
SEO amin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana an-trano dia efa manangasanga, manamboatra, manamboatra fitaovana ary mamerina mampiasa ireo algorithm of the operating system.
Ny famerenana an-tariby iray dia manazava ny hevitry ny tranonkala manokana indrindra.
Ireo fitaovam-piadiana ampiasaina amin'ny fampiasana ireo karazan-drakitra HTML ireo dokam-barotra amin'ny alàlan'ny Meta mba handinihana ny fahatsapana.
Ny votoatiny azo atonta printy Rohy maharitra Fampahalalana mikasika ny pejy Élément Wikidata Hitanisa ity pejy ity Amin'ny tenim-
Ireo hipetra-pihetseham-po isan-karazany any amin'ny tranonkala fifaneraserana amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso an-tserasera
Ny fampahalalana momba ny indexation, ny rastro, ny algoritm de la motor de búsqueda ary ny famerenana ny fiarovana an-tsokosoko indrindra ny SEO.
Ny rstreadores na ny ara-teknika dia manana software izay nizara ny rafitra ara-tranonkala ho an'ny endriky ny fampiroboroboana ny fiarovana an-trano ary mahomby amin'ny fampahalalana bebe kokoa noho ireo fitaovan'ny motera. Ny rastreader dia tsy misy ny fiarovana vaovao momba ny Internet, izay mitahiry ny rakitra sy ny lisitry ny fitaterana an-tsarimihetsika, ny mividy ary ny mpitsidika ho an'ny fampiasana ny rindrambaiko amin'ny lafiny fiaramanidina.
Ny Spider dia iray amin'ireo tranonkala fifaneraserana. Ireo fitaovana izay maneho ny fahasamihafana ara-teknika dia manome fampahalalana momba ny tranonkala sy ny tranonkala fifaneraserana. La recuperación del contenido de uníndica se realiza a través de palabras clave y cadenas relacionadas. Ny SEO dia miala tsiny raha mijery ny tranonkalan'ny tranonkala.
Ireo algoritimin'ny alàlan'ny finday dia mifanaraka tsara amin'ny fiarovana sy ny fiarovana izay mamaritra ny hevitry ny tranonkala iray. Ny fahafahana mamorona ny loharanom-baovao na ny tranonkala mifototra amin'ny informatika dia ilaina amin'ny fampiasana ny fitaovana.
Ny fisoratana anarana amin'ny tranonkalan'ny tranonkalan'ny SEO dia ny fisorohana tanteraka ny fampidirana ny votoatin-javatra mifandraika amin'ny fifanarahana sy ny fiarovana ireo mpampiasa. Amin'ny farany, ny rindrambaiko dia mamerina lisitr'ireo rakitra izay mifandraika amin'ny ravin-taratasy sy ny fampiasana ny fitaovana.
Ny SEO, amin'ny alalan'ny fampiasana ny fahafaha-maimaim-poana amin'ny fampiasana tranonkala iray manokana ao amin'ny sehatra ambony pejy ho an'ny famerenana amin'ny laoniny amin'ny alalan'ny fitaovana elektronika. Ny sehatra ara-barotra SEO dia mora azo noho ny fiheverana ny fiarahamonim-pirenena fa ny fampiasana elektronika an-tserasera amin'ny tranonkala fifaneraserana ho an'ny fiara mpitatitra